Ejipta: “Maniry ny hialàn’i Mubarak izahay!” · Global Voices teny Malagasy
Ejipta: “Maniry ny hialàn'i Mubarak izahay!”
Voadika ny 12 Febroary 2011 4:26 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Português, Italiano, Français, عربي, English
Ampahany amin'ny vaovao manokana mikasika ny fanoheran'i Ejipta taona 2011 ity lahatsoratra ity.
Nanao lahateny fanindroany nanoloana ny vahoaka Ejipsiana ilay mpanambony tena Hosni Mubarak taorian'ny antso fanoherana sy fikatsahana ny fiafaran'ny fitondram-panjakany izay nanomboka tamin'ny valo andro lasa izay (23 jan 2011)
Ny lahateniny voalohany dia nuiverina tany aminy ihany, ary vao maika nitarika hatezerana bebe kokoa teo amin'ireo vahoaka izay maniry ny hialany izany, rehefa nitondra ny firenen'izy ireo nandritra ny 30 taona izy. Ary ny lahateniny faharoa dia tsy nahafa-po ihany koa. Androany (01 Feb 2011) dia nilaza tamin'ny vahoaka Ejiptianina izy fa tsy hilatsaka ho anisan'ireo hofidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny volana Novambra, nitarika fifamorian'ireo vahoaka tsy mahandry intsony ho maromaro kokoa tao an-kianjan'i Tahrir.
Tsy nisy na iray aza fanehoan-kevitra hitako tao amin'ny Twitter hoe mankasitraka io lahateniny io, ary niteraka hatezerana izany ho an'ireo izay nilaza fa tsy hiandry ny volana Novambra izy ireo hialàn'io filoha io: Tian'izy ireo hiala izao dieny izao izy.
Ireto dia misy fanehoan-kevitra maromaro tamin'ny alalan'ny aterineto:
@majda72: Ny làlana nodiavin'i Ben Ali no làlana hizoran'i Mubarak izay feno mpanohitra ! Tsara izany, aleo izy ho afa-baraka eo. #jan25
@gharezig: #Mubarak : Miangavy mba tsy haka tàhaka ny lahatenin'i Ben Ali ! Mahasorena ny mihaino azy ! #Tunisia #Egypt #jan14 #jan25 #copying
@FromJoanne: Tena maniratsira ny vahoaka Ejiptiana mihitsy io rangahy io, mahagaga mihitsy ny fomba fisainany #Jan25 #Mubarak
@RuwaydaMustafah: Nivadika ho biby nohon'ny hatezerana ny eo an-kianjan'i Tahrir! Ny tsirairay avy dia samy mangataka ny #fialan'i Mubarak! #jan25 #egypt
@mimituu1: Fotoana nampihetsi-po indrindra, ary andro fivoarana ny fanambarana nataon'i Faraonan'ny andro maoderina H Mubarak ny amin'ny hoe tsy hirotsaka hofidiana izy amin'ny 09/11. Izay no efa niriako 15 taona lasa izay. Dila izay ny faha 2 septambra. Mandehana amin'izay.
@justthinking: #Toa tsy mieritreritra ny handao an'i Ejipta i Mubarak, na koa hoe hiala amin'ny toerany atsy ho atsy…
@tololy: Nanandra-tena tamin'ny lahateniny i Mubarak. Hoy tsara ny nambarany: Mpanompo mahatoky an'i #Ejipta aho ary manetry tena, fa ireo mpanao hetsika ireo no mpanakorontana sy mpandroba. #Jan25 #fb
@sokkari: Teto dia nisy ny tsy fitovian-kevitra.. ny sasany manaiky fa ny sasany kosa dia mandà #Egypt #jan25
@halmustafa: #I Mubarak mpanambony tena. Sahiko ny manao fanamby aminy izao dia izao ka hitondra azy hitsangatsangana ao Tahrir, ka hampiseho amintsika ny fanandràtan-tenany & ny fireharehàny #jan25
@NatashaTynes: Raha tamin'ny enim-bolana lasa, dia mety nidika zava-dehibe ny lahatenin'i Mubarak. Fa ankehitriny kosa, dia toa tsy dia misy dikany loatra izany satria efa diso tara loatra
Hoy [Ar] @asfefa:
“Andriamatoa Mubarak, namerina ny lahatenin'Ingahy Ben Ali tao amin'ny Twitter ve ianao?”
@litfreak: Somary niahotrahotra kely i Bin Ali ary hita tsara mihitsy hoe natahotra. Fa ity lehilahy ity dia efa tena MPANDAINGA mihitsy, na izy koa no efa tena ratsy fanahy mihitsy. Mampatahotra. #jan25
@Firas_Atraqchi: Hoy i Mubarak hoe hiandry ny fandehanan'ireo mpanohitra izy … avy any Sharm ve? #jan25 #cairo
@AngryArabNews: I Mubarak mpanambony tena: I Isiraely (sy Etazonia) no tena adala: Vao nanao ny lahateniny izy dia hita somary manambony tena izany. Hoy tha… http://bit.ly/hKAeMM
@MunaFakhroo: Eny ary mila miandry hafiriana eto isika !!!! Mbola matory foana ve i Obama? #jan25 #whereishosni ??
For iTalal [Ar], ny fahitàny ny endrik'i Mubarak nandritry ny lahateniny, dia efa ampy azy hanombohany ny tontolo androny.
“Na inona na inona votoatin'ny lahatenin'i Mubarak, dia jereo fotsiny ny endriny. Mahafinaritra ery ny mahita ny fahakivian’ ilay mpitondra tsy maha te ho tia sy tsy refesi-mandidy.”
Ary alohan'ny nivoahan'ilay lahateniny, dia efa nolazain'ny mpanao gazety tao amin'ny Twitter ny votoatin'ilay izy. Nanoratra i Kim Ghattas tao amin'ny BBC:
@BBCKimGhattas: Nanamafy tamin'ny fomba ofisialy tamiko ny Amerikana fa nifankahita tamin'i Mubarak ny ambasadaoro Wisner , ary nangataka tamin'i Mubarak izy mba tsy ho anisan'ny hirotsaka hofidiana, ary mba tsy handroso ny zanany lahy ho amin'izany. #Jan25
Ary farany, nilaza ny @yalzaiat hoe:
“Tsy hilaza ny hevitro mikasika ny zavatra nolazain'i Mubarak akory aho, satria tsy mendrika ny ho rahirahiana izy na dia kely aza. Nanenina aho tamin'ny aretin'ny sofiko azoko vokatry ny fihainoana ny feony. Feo an-tapitrisa no heno nitambatra nahavita feon-kira namaly ny hadalàny!”